Qorshaha Tayaynta Imtixaanaadka Dugsiyda – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ November 8, 2017
8\_November\_2017- Waxaa magaalada Boosaaso si habsami leh uga socda maalintii labaad tababar ay qaadaanayaan 44 macallin oo ka kala socda dugsiyada degmada Boosaaso iyo Ufayn ee gobolka Bari. Tababarkaan oo uu fulinayo Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare Puntland ayaa waxaa maalgelinaya dugsiyada ka qayb qaadanaya.
Agaasimaha Waaxda imtixaamadka Axmed Maxamud Warsame (Axmed Saahid) ayaa sheegay Qorshahan w loogu talagalay in lagu tayeeyo, sarena loogu qaado hannaanka imtixaanaadka dugsiyda si loo helo waxbarasho tayaysan. Aragtida uu xafiiska imtixaanaadku ku shaqaynayo ayaa waxay tahay “imtixaan tayaysan ayaa soo saaro waxbarasho tayaysan”.
Hannaanka imtixaanaadku wuxuu u baahan yahay casriyayan iyo tayayn joogta ah si loo xaqiijiyo yoolasha iyo ujeedooyinka waxbarashada. Sidoo kale, sare u qaadista aqoonta, xirfadda iyo wacyiga macallinku waxay saamayn toosa ah ku leedahay qiimaynota ubadkeenna. waxay kaloo xoojinaysaa nidaamka barbaarineed, qaadashada go’aanno caddaalad ah iyo gaaritaanka aqoon iyo asluub/dhaqan isu dheelli tiran.
Si haddaba loo gaaro nidaam qiimayneed oo ku salaysan baahida manhajka iyo ardayga, waxaa lama huraan loo arkay in la fuliyo tababaroo isdaba joog ah oo lagu tayaynayo korna loogu qaadayo xirfadda qiimayneed ee macallimiinta si loo hormariyo nidaamka imtixaanaadka dugsiyada.
ujeedooyinka qorshahan ayaa waxaa ugu muhiimsan in dugsi walba laga aasaaso xafiis imtixaanaad oo uu masuul ka yahay guddi heer dugsi ah kaas oo maamulaya dhamaan hawlaha iyo nashaadaadka imtixaan ee dugsiga. Ilaa hadda waxaa tababarkaan laga soo fuliyay magaalooyinka Garowe, Burtinle, Qardho iyo Boosaaso waxaana ka qaybgalay 88 macallin
Xafiiska imtixaanaadku wuxuu diyaar u yahay in uu tababarkaas ka bixiyo gobollada Puntland oo dhan.